Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanavakavahana ara-piraisana dia ny fialana amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny fihetsika ataon'ny olombelona Ny zavatra mihoatra noho ny fitsipika ankapobeny momba ny fiainana ara-pananahana. Na dia eo aza ny fisian'ny fiarahamonim-pirenena tsirairay, amin'ny vanim-potoana iray, dia misy ny karazam-pandrenesana lehibe indrindra, izay mbola heverina ho karazana aretina ara-tsaina.
Ny lisitr'ireo fiovàna ara-nofo dia toy izao manaraka izao:
fetishism. Ny olona iray dia manintona ny firaisana ara-nofo sy ny fahafaham-po amin'ny fijerena ny ampahany manokana amin'ny vatana, fitafiana, zavatra, izay maneho ilay mpiara-miasa;
transvestism. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny faniriana ara-nofo mahafa-po isika amin'ny fikarakarana ny akanjon'olon-kafa;
exhibitionism. Ny lehilahy dia mahazo fahafaham-po amin'ny firaisana ara-nofo rehefa maneho ny fiterahany amin'ny olon-tsy fantatra;
voyeurism. Faniriana hifehy ny firaisana ara-nofo, olona mitanjaka. Ny fandefasana azy dia fientanentanana tafahoatra ny sary vetaveta;
pedophilia. Iray amin'ireo endrika faran'izay mampidi-doza sy mampidi-doza indrindra amin'ny fanodinana sexe. Ny firaisana ara-nofo amin'ny ankizy;
sadomasochism. Ny fahafinaretana vokatry ny alahelo sy ny fahatsapana fanaintainana, ny faniriana hanerena mpiara-miombon'antoka iray na toerany eo ambany.
Ny fahadisoana ara-nofo amin'ny zatovo sarotra dia tena mahazatra amin'izao androntsika izao. Ny fahasorenana ara-pananahana amin'ny adolescence dia sarotra dia tsy ny fiovana ara-batana fotsiny, fa ny an'ny psychic ihany koa. Ny tsy fahatanterahan'ny fahamendrehana ara-nofo dia miteraka firaisana ara-nofo tsy azo antoka sy lehibe. Amin'io lafiny io dia tena avo lenta ny fiovana ara-nofo. Ao amin'ny faritra iray mampidi-doza manokana dia misy ankizy izay efa mihetsiketsika ela be, na, raha ny marina, dia mihombo haingana.
Ny fahadisoana ara-nofo eo amin'ny tanora dia miankina mivantana amin'ny toe-draharaha ary tsy maharitra. Miaraka amin'ny taonany, dia mihelina ny endri-javatra toy izany. Ny ankamaroan'izy ireo dia:
Voyeurism (mitsikilo tsy mitafy, mijery sary vetaveta);
Ny tombotsoa tafahoatra amin'ny ankamaroan'ny zaza sy ny biby.
Momba ny antony sy ny fomba fitsaboana
Ny fahadisoana ara-nofo dia tsy aretina. Ny fitsaboana ara-pahasalamana dia tsy ilaina raha tsy miteraka olana ara-psikolojika sy olana ireo fahadisoana toy izany. Ity farany dia mety hipoitra noho ny fisehoan'ny sazy vokatry ny fanitsakitsahana ny lalàna (pedophilia, jadona sadisma).
Ny fampiharana ny fiovan'ny firaisana ara-nofo dia mampihatra karazana teknolojia ara-pahasalamana. Ankoatra ny fampihenana ny faniriana ara-nofo tsy ara-dalàna, ny fitsaboana dia mikasa hanampy amin'ny fanekena olona tahaka azy. Raha misy loza mitatao ho an'ny fiarahamonina ny fialamboly, dia ampiasaina ny fomba rehetra hiadiana amin'ny fihanaky ny firaisana ara-nofo. Ankoatra ny fitsaboana tsy ara-dalàna ny fitsaboana ara-dalàna.
Inona no mahatonga ny fahadisoana toy izany? Ny antony mahatonga ny fanavakavahana ara-pananahana dia azo sokajiana toy izao:
trauma amin'ny atidoha ary, noho izany, ny fanelingelenana ara-tsaina;
tsy fahombiazan'ny hormonal background;
fanitsakitsahana isan-karazany amin'ny fampandrosoana ny psyche olombelona;
fanitsakitsahana ny fampandrosoana ara-nofo;
karazana fanabeazana ara-pananahana.
Ny antony lehibe tokony horaisina an-tsoratra dia ny traikefa ara-tsaina amin'ny ankizy iray amin'ny fahazazany. Izany dia mety ho fanararaotana ankizy amin'ny olon-dehibe, toe-javatra tsy fantatra amin'ny herisetra ara-piraisana na firaisana ara-pananahana, sns. Noho izany, rehefa mitaiza zaza iray dia tokony hahatsiaro ny andraikitra mifandray amin'ny ray aman-dreny.
Arovy ny fahasalamana sy ny psyche amin'ny zaza.
Iza no tsy manaiky - famantarana ny aretina sy ny fomba fitsaboana
Ny fomba fitsaboana hypnosis
Imagination toy ny fisainana ara-tsaina
Ny fisainana sy ny lahateny amin'ny psikology
Ahoana ny fomba hahatonga azy ho vehivavy?
Chahokhbili avy amin'ny duck - recipe
Cat tattoo - ny dikany
Lalao amin'ny ririnina eny an-dalambe
Boots Women - Winter 2015
Karakarao ny kavina
Ruby Rose sy Nina Dobrev
Sakafo avy any Alsou ho an'ny kamo
Sariitatra momba an'i Babu Yaga
Catherine Deneuve dia lasa brunette
Ahoana no fomba hanaovana ny talismanana ho vintana tsara?
Nodimandry ny renin'i Elton John
Ny fanatanjahan-tena voalohany ho an'ny fampinonoan-tena - rafitra iray
Fisaraham-panambadiana eo anatrehan'ny ankizy madinika - ahoana no handehananao ny zava-drehetra amin'ny fomba marina sy tsy misy fanaintainana?